Faritra Betsiboka :: Mihatanora ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH/Sida • AoRaha
Faritra Betsiboka Mihatanora ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH/Sida
Mahatratra dimy amby roapolo ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina VIH nandalo sy raisina an-tanana ao
amin’ny faritra Betsiboka. Ny 75% amin’ireo mitondra ny tsimokaretina VIH ireo dia tanora latsaka ny 25 taona avokoa, araka ny antontan’isa navoakan’ny fari-piadidiana ara-pahasalamana ao an-toerana. Ambany dia ambany anefa ny tahan’ny fitiliana ao amin’io faritra Betsiboka io, satria tsy misy afa-tsy ny 1%-n’ny mponina mihoatra ny 18 taona no manao an’izany.
«Raha tsy misy ny fifanohanana amin’ny ady atao manoloana ny tsimokaretina VIH/Sida, izay manomboka
amin’ny fampahafantarana ny fisehon’ireo aretina vokatry ny firaisana ara-nofo tsy voaaro dia ho loza mitatao eto Madagasikara ny fihanak’izany aretina izany », hoy ny dokotera Rakotoarivony Manitra, tale ny fampiroboroboana ny
Nampahafantarina nandritra ny fanamarihana ny ady atao amin’ny tsimokaretina VIH/Sida tany an-toerana io toe-javatra io, tamin’ny 13 desambra lasa teo, izay natao nifanojo tamin’ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2019-2020.
Hanao ezaka lehibe ny any amin’ny faritra mba tsy hampirongatra an’ity areti-mifindra ity any an-toerana, toy ny fiaraha-miasa eo amin’ny CSB sy ny sekoly, fampahafantarana sy fanentanana any an-tsekoly sy eny anivon’ny fiarahamonina. Hisokatra ho an’ny tanora ny tobim-pahasalamana rehetra handraisany toromarika sy ahafahany mangataka fanazavana mikasika an’ireo aretina ireo.
Famolavolana rakikira :: Lavitra ny lalana diavin’ireo mpanakanto mialoha ny fivoahan’ny sanganasa iray
Hevitr’i Esther Randriamamonjy :: “Mila boky maneho ny zava-misy ankehitriny eny an-tsekoly”